Mhlawumbe uke wabona amawebhusayithi amaningi esebenzisa amavidiyo agqwayiziwe emakhasini awo okufika. Akunandaba noma ngabe uwaqamba ngamavidiyo achazayo noma amavidiyo ezinkampani; bonke basebenzela inhloso efanayo: ukuchaza umkhiqizo noma insiza ngendlela elula futhi esheshayo, ebenza babe ithuluzi elihle lokumaketha kunoma yiliphi ibhizinisi.
Yisiphi isitayela esihle kakhulu sevidiyo echazayo eshukumisayo yewebhusayithi yakho?
Umlingiswa uvame ukumela i-brand persona yakho (izithameli eziqondiwe), ngakho-ke kubalulekile ukuba nomlingiswa owakhelwe ngokwezifiso ohlobana nabo ngokweqiniso, enze uphawu lomkhiqizo wakho ngokuwunika imizwa nobuntu. Lezi zinhlobo zamavidiyo zinemiphumela emihle ngoba zisheshe zibambe ababukeli futhi kumnandi ukubukwa.
Le ndlela esezingeni eliphakeme futhi epholile ekuqaleni yadalwa ngumdwebi wezithombe owadweba ibhodi elimhlophe ngenkathi iqoshwa ngekhamera. Kamuva, le ndlela yavela futhi manje isidalwe ngokwamanani. Emuva ngo-2007, i-UPS yabonisa ama-Whiteboard Commercials, kwathi ngo-2010 iRoyal Society of Arts yakha ukugqwayiza kwamabhodi amhlophe kusuka ezinkulumweni ezikhethiwe, okwenza isiteshi se-Youtube se-RSA sibe yisiteshi esingu- # esingenzi nzuzo emhlabeni wonke.